Nongedzo: Cyber ​​(cybercafé) neLinux, zvinoita here? | Linux Vakapindwa muropa
Zvakatora nguva yakareba kuti ndive neinternet kubatana kumba uye kwemakore ini chete nzira yekuInternet (kunyangwe ndaigara ndichiifarira zvakanyanya uye yaindibatsira kwandiri) ingave chikoro kana cybercafé.
Zvinonzwisisika, uye kunyangwe hazvo iko kupinda kweInternet kuri kukuru nhasi, cybercafes kure nekufa, kuwanda, ikozvino shandisa basa (pachiyero chavo) rweverunhare. Asi isu vedu vaishanya munzvimbo idzi makare-kare, munguva yakapfuura uye ikozvino, tinoziva kuti vane zvinhu zvinotinetsa uye kuti taisazotambura kumba.
Dzimwe nguva zvinoitika kwandiri kuti ndinoenda kune cyber, nekuti ndiri mumugwagwa, kunyangwe ini ndichishandisa WAP zvakanyanya, hazvina kukwana pane zvandinofanira kuita kana zvinoita kuti zvinyanye kusanzwisisika. Ini ndinobvunza PC, ndinogara pasi ndobva ndaisa pendrive kwandinayo iyo Firefox Inotakurika izvo zvinondibatsira kuti ndive nenzvimbo dzese dzandinogara ndichiwana. Ini ndinotanga kutaipa uye ndinoziva kuti inononoka, zvisinei kuti ndeyipi cyber yandinoenda, iWindows uye ndinonzwa ndisiri panzvimbo, ndinoita zvandinofanira kuita, nguva dzese kana imwe nguva ndinowana kukanganisa, zvinoenderana nekuchengetedza Chikamu chemuno, ndinonzwa mumwe munhu anenge zvigaro zvitatu kure achiti: "Pamusoroi, asi PC iyi haibatanidze", handirambe ndichiteerera, ndinofanira kuenda, ndinotora pendrive yangu, ndobhadhara ndoenda.
Sezvo ini ndiine Linux, ndinopinda mumba PC uye ndobva ndangoona mavhairasi pachigadzirwa ndoadzima. Dai ndanga ndisina Linux hutachiona hwaive hwakachengeteka. Muzviitiko zvakanakisa hutachiona hwacho hwakaitika mune kumwe kushanya kwega kwega kune imwe kofi yeinternet.
Zvese izvi, ndinofunga, zvinotora nguva, hupenyu hwehupenyu uye munguva yekufamba mari kubva kuvaridzi venzvimbo idzi.Wadii kushandisa Linux uye kupedza nyonganiso kamwechete?
Linux internet cafe inoita kunge zano rakanaka, asi ine akati wandei matambudziko:
Chekutanga cheaya matambudziko ndechekuti zvinonyatso kutyirwa kuti vatengi vatsva vanozopambwa nepuratifomu isingagone, izvo zvingave zvisingaite kudzidza muawa (uye dzimwe nguva kushoma). Kufungidzira izvi chete vazhinji vangasiya zano ipapo, asi wadii kuvanza Windows kuitira kuti vanhu vasanzwe kushamisika. Kana pakutanga tichiedza uye vanhu vasingade kudzidza, zvingave zviri nani kuvaita kuti vatende kuti Linux iWindows XP.
Kunze kwevatambi (vandichataura nezvavo pazasi), vanhu vanouya kuzoita zvinhu zvakapusa pane cyber senge enda kune iyo photoblog, tarisa Facebook, taura paMSN uye vamwe vane GTalk (mudiki) uye surf. Izvo zvinoitikawo kuti vanhu vanogamuchirwa vanofanirwa kupurinda makarikhulamu kana migove yechikoro inoitwa neShoko.
Iwe haufanire kunge uri nyanzvi kuti uone kuti zvese izvi zvinogona kuitwa neLinux, nechero distro. Kune chete zvinhu zvinoverengeka zvinogona kukonzeresa.
1.- Ziva maitiro ekuwana iyo pendrive uye yemuno dhairekitori (iyo / imba) uko mafaera anotorwa kana uko maOpenOffice mafaera ari kuzochengetwa.
2.- Kuti mapurogiramu akasiyana zvakasiyana, kunyangwe achizadzisa iwo mamwe mabasa.
Asi zvese izvo zvinogona kugadziriswa:
1.- Kune madingindira eGnome uye eKDE anonyatsofanana neWindows XP (ine neshure Teletubby inosanganisira) XPGnome inosvika padanho rekunyengedza mushandisi nekuudza zvakajeka mushandisi kuti ivo vachiri muWindows uye zvichiita kuti zvive nyore kuwana maforodha sezvatinoda. Muchiitiko che KDE kutevedzera kwandakawana hakusi padanho iro asi KDE Inotarisa ine imwe nzira yekuita kuti KDE iite senge Windows Vista.
2.- Kusarudza mameseji mutengi ayo atinozoshandisa paPC yega yega anofanirwa kutariswa zvakanyanya, inofanirwa kuve neushamwari sezvinobvira neanoshandisa MSN yekutanga. Iyo aMSN Iyo inonyanya kufanana neyepakutanga uye ne chirongwa cheMSN2 ivo vari kushanda kuti zviitwe zvirinani uye nekukurumidza.
Imwe nyaya ndeye iyo Microsoft Word iyo kunyange ichitsiviwa neOpenOffice, kupfuura nakare kose inogadzira fomati yekutsinhana zvinokanganisa izvo zvinogona kutsamwisa mutengi. With CrossOver Linux Izvo hazvingambove zvakafanira kupfuura kuburikidza nedambudziko.
Manager software yeInternet maresitorendi neLinux kune zvekare CBM ine vhezheni yeLinux. Zvakare zviripo Cyborg.
Uye ko izvo nezve Gamers?
Ndisati ndanyora chinyorwa ichi, ndainetsana naEsty, akandiudza kuti zvese zvandataura hazvina kukosha nekuti maInternet cafes ndee gamers y Ndakatanga kuchema Ndakapindura kuti Waini anogona kuita musiyano.
Vakakurumbira Kudevedzwa pabasa, mune yayo vhezheni yechina, inoshanda muLinux, muridzi weiyo cyber, yaingofanirwa kuitisa kuti itange neWine zvakananga mushure mekutevera matanho aya kuiisa.
Ingori semuenzaniso, mimwe mimwe mitambo inyaya yekufamba-famba "zita remutambo + Linux" maitiro avakaiswa uye vanongomhanya.
Kupedza, ndinokuratidza vhidhiyo yeiyo cybercafé iyo yaigona:
Onawo: CiberLinux kugoverwa kweGNU / Linux kwema cybercafes
Mufananidzo wacho ndewe shinyai uyo nenyasha anoipa iyo LXA! munhu wese ari pasi Creative Commons
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Zvakadii necyber café neLinux?
Rima knox akadaro
Pamusoroi…. Ndiri kudzungaira mumwe wemitambo yeZIP 2 ine ropa rakawanda kumhanya pamahwindo nekuti Ubuntu inononoka kutamba….
Izvo zvekuti varidzi vema cybergs havatozive maitiro ekumisikidza nekuisa windows izvo zviri nyore kwazvo kuita ps ini kanoverengeka uye ndoshandisa izvi ... x ahem ndakatakura pendrive yangu ndikaba mavhidhiyo ezvinonyadzisira, mumhanzi, uye nenguva iyoyo. Ini handina kuwana iyo gta cds uye ndakaba kubva kuhai, zvakare pandakanga ndichida ntdlr ndakaenda ndikanoiba kubva kumuchina wecyberg (uye ndikazoibvisa kubva kwavari) apo mune dzakawanda-mbiri ndakatanga kutumira mameseji kune vese MaPC hehehehe ini handina aucerod sezvazvainge zvaitwa, zvaive zvakanyanya.
Zvakare kana ndangobvarura iyo admin kupinda neCia Commander pane floppy disk uye pandino hiva lar ndoitanga uye kudzoreredza iro rekare password hehe
Ini ndinofunga kuti gare gare, sezvo ini ndiri farting pano nema windows, ndiri kuenda kunotsvaga ma ocsas ndogadzira AIO kubira windows (kuba account admin, kuba kubatana, kuita muchina wacho http://FTP...)
Pindura kune Rima Knox
Zano rakanaka kwazvo, chaizvo. Kunyanya pakuratidza chimiro chinozivikanwa kune vazhinji vashandisi (zvakanyanya sekurwadza: P)
Imwe pfungwa yandakaona mune mamwe ma cybers kuSpain ndeye kushandisa yakadzika chando http://es.wikipedia.org/wiki/Deep_Freeze_(software) kuti isoftware iyo 'inomisa' dhisiki rakaomarara rekombuta, ichirasikirwa neshanduko mukutangazve kwayo. Idzi shanduko dzinogona kuve yekumisikidza, kurodha pasi mafaera, chero chinhu chakarasika kana uchitangazve.
Pane imwe nguva ini ndanga ndichiyedza, uye zvakanaka kana iwe uchifanira kuyedza kuisa akawanda mapurogiramu, uye iwe haudi iyo registry yekuzadza nemarara
Pindura kune shaggylish
Ini ndinofunga izano rakanakisa, nekuti haufanire kunge uchitenga marezinesi emuchina wega wega, software yemahara ine zvakawanda zvakanaka asi iwe unogona zvakare kuisa chinyorwa mubikiro rega rega rekuti ungawana sei dura reimba kana kuiisa pakombuta uye zvitaurire kuti zvakafanana nezvinyorwa zvangu, zvakapusa
Icho chikonzero nei linux isingashandiswe mumacbers imhaka yekuti vanhu vazhinji vanogadzirisa ma cybers havaigadzirise ivo kana chero chinhu ... ivo vanongova kumberi-kumagumo: p
3 ma cybers andinonyatsoziva padyo nepamba pangu, iwo matatu ndiwo mamiriro akafanana: mukadzi asingatombozivi kana zano rezvaanoita kupfuura kupa "clip" kune zvinhu zvekupa internet uye ikozvino: p , chiri kumashure ndeimwe yeaya "mahunyanzvi" ane panacea ndiyo C: \_ fomati. Ndine chokwadi chekuti dhinomineta.
Kana izvo zvavanoziva kuzviita ndizvo izvo, uye kwavari zviri nyore kwazvo kumisikidza mwedzi wega uye nekuisa zvese ... kuitira kuti hupenyu "hwakaoma": p
Ini ndinofunga havana basa nekupa sevhisi yakanaka, asi kuwana mari uye hapana chimwe chinhu ... kunyangwe kuita uku kuchiratidzika kunge kupusa kwandiri nekuti iro basa rako riri nani, vanhu vazhinji vachatoda kurishandisa uye nemari yekuwana.
Kuti mune iyo kesi iwe yaunobata yako wega cyber, kana iri imwe yeavo "kumberi-kumagumo" ma cybers, anoita zvekuchengetedza paPC, zviri nyore kumufonera chero hafu yeawa kumukumbira kuti aite fomati nekuti ivo hutachiona hwakazara, uye pasina chinhu munyika iwe urikuda kusiya iyo yakachengeteka mari.
Iyo imwe yeaya kesi apo kuve wepakati kuripa mari yakawanda pane kuzviita nenzira kwayo: p
Tinokanganwa chinhu chakakosha kwazvo, uye ndizvozvo kuti uyo anoisa mari panjodzi bhizinesi haasi isu, asi varidzi vecyber. Kuve neLinux tsika hakusi nyore izvozvi, ndosaka Windows iri sarudzo kune vanhu vazhinji.
Imwe poindi yekuchengeta mupfungwa ndeyekuti maPC ecyber anoshandiswa
nevanhu vazhinji, uye mumwe nemumwe anozviparadza sekuda kwavo. Mudzimba medu tinopuruzira makomputa edu, zvatinoisa nekushandisa. Zvakafanana nekambani inorenda mota. Kana iwe uchirenda (semuenzaniso) Mercedes kana BMW, mushure mechinguva, idzi mota dzinozoparadzwa zvakanyanya kupfuura yedu yemota mota.
Kushandisa Linux pane cyber zano rinonakidza, kunyange zvichitoda nguva yakawanda nesimba kuti uchengetedze. Kune rimwe divi, sebhizinesi, iwe unofanirwa kugutsa zvido zvevatengi vako. Kana mazhinji eaya achida Windows, vanozoenda kune imwe cyber. Ini ndinofunga chakanyanya nyore chinhu kuve, semuenzaniso, 75% Windows uye 25% Linux, uye sezvo iwe uchiona kuti vatengi vako vanogoverwa sei, chinja iyo quota yekushandisa.
Kana ini ndichifunga kuti ichokwadi, zvinoita sekutuka seyakanaka OS seLinux kuyedza kuidzikisira kumahwindo, zveshuwa izvo chero bedzi tisingataure nezve gammers, maererano navo ini ndinorangarira ndichiverenga nezve yakakosha isingatarisirwe kuhwina ma gammers ayo anenge asina kushandisa zviwanikwa asi aive nezvose zvakaganhurirwa nekuti anga akatarisana nemagammers.
ichokwadi kuti mu linux mune mitambo yakanaka…. asi ini ndinosuwa GTA Visi Guta uye ndinofungidzira kuti GTA IV ichazobuda chete kune windows uye nekuhwina ikoko handizive kuti kutevedzera maapisi uye kugona kutamba handizive…. kana izvo zvikateedzerwa isu tingave isu panjodzi kune windows hutachiona, handiti? Ini ndinoda kuve nekaviri bhuti kana ini ndine muchina wakadzikama une windows gammer uye debian kana imwe distro
Ini ndakakanganwa, kana paine anoziva chero GTA-mhando mutambo we linux ... ivo vanotoziva wavanofanira kuudza ....
idiki sei yako
zvirinani linux yako kuti ive inoshamwaridzika, inzwisisike, yakajairika, linux yega yega inoenda kwainoda
gadzira kde isingave nenjodzi dzakawanda, uye hausi kunyanyisa kana kukunda, uye ipapo linux ichave nemukana wekupedzisira mushandisi ..
Pindura kune apache
Ini ndinowana iyo pfungwa ye linux yakanakisa mukati me cyber maresitoremu uye zvikoro, maraibhurari nevamwe, zvinoita kwandiri kunge rakakosha danho kumberi, kune shamwari yedu iyo penguin,
Ehezve, aya mafungiro ako andisingabvumirani nawo zvakanyanya ndeekuzviviga semawindows, handizive kana nekuda kwekuti ini ndinoda kurapa masisitimu nezita ravo, mune izvo zvandinoita mac as mac a linux kunge linux uye windows ini handitombozvibata
Uye ini ndinofunga kuti nekuzvivanza sechimwe chinhu icho pachacho chisingashande, hatizviite kuti tizivikanwe asi isu tinopa kushambadzira kwakanaka kune izvo zvisingashande mune vanhu vane ruzivo diki vanoona pc neLinux vobvunza, mahwindo ndeapi? izvo?
ziso rakareruka zano rako pachako hapana chinopesana nekusimudzira kupinda kwe linux mu cyber
asi ini ndiri mumwe weavo vanonditsamwisa ini kuona linux ine mac kana windows kuvhara
kwandiri ndiko kusaremekedza kukuru sekuisa mbatya dzasekuru vangu pambuya vangu nekuvagarisa muharare
asi zvakadaro, mazuvano zvakajairika vane pc ine linux vanoisa mac kana windows kuvhara pairi uye kana vaine iphone vanoda kuisa linux pairi
kana iwe uine windows mune rako basa nechisungo uye iwe unoisa linux chivharo kuti unzwe zvakanaka kubiridzirwa
asi izvo zvinopinda mune musoro we pakati pezvakanaka nezvifukidzo
Ndinovimba kuti nyika inotiziva isu zvatiri uye nezvatinopa uye kwete zvekuda kuoneka kunge mahwindo ekunyaradza kwemeso asina kujaira.
Ndinovimba usazonetseke nekomendi yangu :) Urarame kutux-clan :)
Ini handizive nezvako, handisati ndaona shamwari yangu Nacho padhuze apa. Zvingave here kuti "windows-clanero" akamubira? :)
Pfungwa yakanaka, ini ndinonzwisisa kuti kune vamwe vari kushanda neUTUTO muTucuman kana Jujuy. Zvinondishamisa kuti isu tinokanganisa aesthetics yedesktop neiyo yekushandisa system. Kuipa iyo xp kana mac kutarisa haisi yekunyepedzera, inyaya yekuravira kana iri yega, ndeyokuita kuti zvinhu zvive nyore kune avo vanotenda kuti desktop ndiyo inoshanda system. Ini ndaishandisa michina mu press computing centre yemusangano wepasirose wa2005 muPorto Alegre uye ndakangoona kuti vaive gnulinux nekuti ndakatanga kusora kuti kwaive, mazana akaishandisa mazuva iwayo haana kana kunetsekana.
Zviri pachena kuti iko kusaziva chete, dai varidzi veiyo cyber vakaziva kuti vaizochengetedza mari nekuchengetedza basa, vangadai vasina kukahadzika nazvo.
Zvinotaridza senge zvakakomba kwandiri kuti nyika iri kuramba ichishandisa m $
Alan Rodriguez akadaro
Puess ... iwoyu iwo zano ini ndanga ndichidzungaira kwechinguva, ndichigadzira cybercafé ine linux.
Kunyangwe zvichikonzerwa nekusaziva kwevanhu uye neiko maInternet cafes anoshandisa (kurodha mimhanzi kubva kuFucking Ares), ini ndinofunga chinhu chakanakisa kuve neese OS pane cyber, asi kukurudzira kushandiswa kweLinux pakati pevashandisi.
Pindura kuna Alan Rodríguez
Nemashoko akadzika echando iwe wakandiita kuti ndirangarire ichi chinyorwa kubva kune rimwe blog (zvakanaka kwazvo, nenzira)
Fedoreando! zvakare, makorokoto
@ Rafael Hernamperez
Ini handifunge kuti imutengo wakakwira kushandisa linux (kwete zvachose, zvakanyanya kushomeka), zvisinei, ndinobvumirana newe pane izvi:
«Kana mazhinji eaya achida Windows kubva kwauri, vanoenda kune imwe cyber. Ini ndinofunga chakanyanya nyore chinhu kuve, semuenzaniso, 75% Windows uye 25% Linux, uye sezvo iwe uchiona kuti vatengi vako vanogoverwa sei, chinja quota yekushandisa. »
@Alan Rodríguez: Nezve Ares pane dzimwe nzira muLinux http://120linux.com/ares-en-pinguino-sin-necesidad-de-wine/
Zvinoitika kwandiri kuti zvichitevera pfungwa yaRafael Hernamperez isu tinogona kuisa iwo maPC neWindows neLinux, kuchipa zvakachipa kushandisa iyo PC neLinux. Saka paizove nekukurudzira kunooneka kwekuishandisa.
Mitambo ndiyo iyo inoda kuenda kuLinux. Mamwe ese emahara software akatogadzirirwa iwo ekutanga mashandiro eiyo cyber-cafe.
Zvirokwazvo, kana iyo mitambo ikashandisirwa kuLinux, ichi chichava chakanakisa zana% inoshanda imwe yecyber-cafe.
Ini handioni musiyano kana kuoma mukushandisa windows kana linux kune akajairika mushandisi. Kufambisa mbeva, kudzvanya kaviri, uchishandisa izwi processor, msn, kuongorora internet, nezvimwe, zvakangoita sezviri nyore pamawindows uye linux. Rangarira kuti kufunga kwePC kunogara kwakafanana, iwo maodha akaenzana uye anonzwisisika.
Ini ndoda kuona linux mu cyber, makambani uye yeruzhinji chikamu !!
Izvo zvekuti haichanzi "Outlook Express" asi "Mozilla Thunderbird" kana pachinzvimbo che "Microsoft Word" inonzi "Vhura Hofisi Munyori" chikonzero chakaringana kuti vashandisi vatore mazita aSatani mumitauro yakasiyana siyana. Vanoziva: p
Ndinochiziva nekuti ini ndakachirarama pachezvangu (T_T) uye kubva pane zvakaitika kushamwari dzinoverengeka dzakaedza kuita gnu / linux mumakomputa emhuri dzadzo (kuve kesi kunyangwe iyo OS chete inowanikwa !: D)
Dingindira remitambo riri kuita zvirinani nguva dzese
Valve yakasimbisa yayo NATIVE mutengi ye steam ye linux: D
@ munhu wese
Ini ndinokurudzira kuti ma cybers aise iyo XP theme, chinja mazita ese mafomu, sekutsanangurwa pamusoro (OO Munyori-> M $ Shoko, OO Impress-> M $ PowerPoint, aMSN-> MSN Messenger), Urban Terror yakaiswa uye yakashambadzwa se Counter-Strike, uye kungo kuvimbisa iyo ILLUSION yekushandisa windows, kuti iyo pc yega yega hafu yeawa yebhuruu skrini yerufu !!!!! : D: D: D: D
kumwe kunyengera: yega yega maminetsi gumi yambiro inoonekwa ichiti "hutachiona hwaonekwa, tinya pano kuti uchenese"
Iwe unofungei nezve pfungwa yangu? :)
Iyo yakanaka nzira yekuyedza uye kuzviita. Ichokwadi ndechekuti ini ndinoda kuona kuti kune akati wandei cyber vane rudzi urwu rwechinhu. Asi ichokwadi mune zvimwe zvinhu zvinotaurwa. Usanyengere chero munhu kuti haisi linux. Iyo linux, ungave kana usiri kuda rimwe dambudziko. Vanhu vanowanzo kutya zvese. Asi inyaya yekubvisa kutya ikoko uye kuona nekuyedza. Hapana munhu achauya nemagweta kuzoona kana uchifanira kubhadhara rezinesi. Nekuti ndizvo zvavanoita mumabhizinesi zviitiko. Asi ichokwadi kuti zvakakodzera kuona kuti pane imwe sarudzo iri nani,
Ndinovenga kuti vanoenzanisa windows ne linux .. Ndinofunga kana iwe uchida kutamba, ingoshandisa windows, uye kana iwe uchida kushandisa linux, shandisa iyo chaiyo linux, kwete kuti inoita kunge shiti kubva kuMicrosoft .. kune mitambo yemahara yakagadzirwa kune chero linux, Kana iwe uchivada nemazvo uye kana usingashandise windows uye hapana chimwe chinhu .. ndosaka ndichifunga kuti kana ukazvipira kune cyber, uchafanirwa kutengesa windows, asi uchigara uchiratidza mukana we linux, iyo yakanaka asi yakakwana linux ..
Zvakanaka, izvo zvinoita kunge zano rakanaka kwandiri sezvo Linux yakagadzikana kupfuura Windows uye sezvo vazhinji vachishandisa Windows, yaisazombojaira Linux, asi hei, ini ndiri cyber maneja uye zvinoita kunge zano rakanaka kubva Windows ichipa matambudziko mazhinji uye anomhanya zvakanyanya
Mhoro Kana zvichishanda .. tine 2 cyber ... imwe 90% ubuntu, uye imwe 40% ubuntu .. uye vanhu vanojaira .. Handifarire iyo ye "kuenzanisa" Windows ... ne kuti isu tichiri kusungwa kuchinhu chimwe chete .. ipapo Chii chekuudza vatengi netsamba dzese ... IYI NDI LINUX murume ... uye tora sisitimu yacho kuenda kumba kwako kana uchida (iso mufananidzo pane desktop) ... yakadzokororwa ubuntu ... Zviripachena unofanira kunditengera iyo DVD iyo kana .. :) ..
kumbundira kune vese uye ngatirambei tichisimudzira iyo yemahara SW (kunyangwe ini ndiUbuntu nemuridzi wechitatu asi zvese zviri pamutemo).
Izvi zvinoita kunge zvakanaka kwandiri. Sezvakataurwa nemurume wekhamera, ndiani anobhadhara makumi maviri kana makumi matatu marezinesi eWindows? Hapana munhu, asi zviri nyore kuve zvisiri pamutemo pane mahara.
Parizvino ndave kuda kuyedza nemudhara wangu mumushini chaiwo, kuti ndione zvinoitika naUniuntu, asi ndine chokwadi chekuti ndichaenda kunosunungura hehe
Ichokwadi ndechekuti 30% yevanhu vanoenda kune cyber zvishoma kana kusanzwisisa chinhu, kana iwe ukavadzidzisa mozilla, skype uye amsn vangatofanira kufora nemavhiri! uye kunyora chero chinyorwa chinyorwa chinokushandira. kana mune ino OO3.
Izvo hazvidikanwe kuti ufukidze iyo system, yatove nehushamwari uye iri nyore kushandisa, iwe unongofanirwa kurega kufunga sekirobhoti uye vhura pfungwa dzako.
Pindura kuna Bhandi
WOW Rima Knox !!! unoseka hako !!! enda kunodzidza salami, zvirinani dzidza kunyora usati….
Kana iri cyber, chembere yangu inoshandisa Linux uye iye anotoda kupfuura Windows ... Zviri kungozviedza, ini ndangoshandisa Linux kwemakore.
CBM haina vhezheni yepamutemo ye linux, inongova neshanduro yemahwindo uye vanokuudza kuti iwe unofanirwa kuimhanya newaini kuitira kuti ideredze ekipo, uye cyborg nekuti yakaoma kwazvo kuisa kune vashandisi vevashandi vanoda kukwidza cyber ne linux saka vanofanirwa kuverenga nekuyedza zvishoma kana vachitaura, zvisinei ini ndave kutoshanda mukugadzirwa kwechizvarwa cybercafé yekudzora chishandiso cheLinux. Ndiri kuchikudziridza negembas2. Kana mumwe munhu achida kubatana, nyorera ini.
Pindura kuna krist
cyber Reyna`s akadaro
Ini ndaida kuisa imwe asi hapana rwakawanda rutsigiro rwehunyanzvi kana kuti, pane kushomeka kwevatyairi kune mamwe maPC uye iri muChinese allar madhiraivhu ayo yaisina mune linux os, yakakosha kana ndikaiisa mukati PC yangu asi ini handiwani vhidhiyo yevatyairi vhidhiyo, nezvimwe, saka ndakasarudza kuisa neMicrosoft operating system, chimwe chinhu chisinganzwisisike asi ndichishanda nevatyairi vese maPC akasiyana andinayo mu cyber.
Pindura cyber Reyna`s
ZveLAN FPS zvinowanzo ridzwa, Urban Kutyisa isarudzo huru, zvakare yakasununguka uye yemahara saka haufanire kubhadhara chero chinhu [zvinobva pakushambadzira pane peji rako, ndinofunga], WoW inomhanyawo zvakanaka, iyo iyo Zvinonditambudza ihondo yehondo ine garena, garena yemusi weChitatu
Ini ndinotenda kuti hazvidi kuti unyengere mushandisi, zvirokwazvo, itsika yakaderera uye yakaipa.
Linux inofanira kushandiswa zvirinyore, inondikwezva kuti ndipe hupenyu hutsva kumaPC angu ekare, kwandiri ndiwo mukana we linux.
Nyaya yemavhairasi uye yekugadzirisa ndiyo shoma yacho, yakanyatsogadziriswa windows pc ine yakanaka antivirus haipe matambudziko. Ehezve, zvese zvishandiso zvinoshandiswa kazhinji zvinoda kugadziriswa, izvo hazvigume kana uchishandisa linux, zvisinei, mutsauko uri mukuziva nzira yekupa iyo yekuchengetedza iyo pc. Iyo pc inokundikana nekuda kwekushaikwa kwekuchengetedza, ndizvozvo chete.
Zvino, Linux ndeye mahara, Windows inobhadharwa, asi kana iwe ukashandisa marezinesi kubva kushanduro dzekare, inenge yemahara. Ini ndinoshandisa windows xp, iri yakachipa pari zvino uye inoenda zvakakwana neyakare uye nyowani michina. Musiyano wekusabhadhara chero chinhu mulinux, uye kubhadhara zvishoma nemawindows xp anenge asiri nil, chokwadi ndechekuti ini ndinofarira kubhadhara kuitira kuti ndipe vatengi vangu chigadzirwa chavari kutsvaga, pachinzvimbo chekuvanyengedza kuitira kuchengetedza vashoma. pesos.
Uye kuti, Linux inotsigirwa pasi pekunyepedzera kwehupfumi, asi iwe unofanirwa kuve gokora kwazvo kuti uende nechikurudziro ichocho. Iwe unofanirwa kuisa mari mu cyber, senge iyo kana kuti kwete, kwete nekuti imari yekunyepedzera, asi nekuti vatengi vedu vanokoshesa iyo investa.
Ndiri kureva, ini ndinobhadhara nzvimbo yangu, zvishandiso uye zvemunhu mari, uye zvakadaro ini ndichine mari yakawandisa yekudyara munzvimbo yacho. Haisi pfungwa yakanaka here kuisa mari shoma iyoyo mumakasitoma edu? Mumwe haakwanise kuvabhadhara windows kana rezinesi rehofisi kuti vashandise mafaera avo pasina chikonzero chechero chiito chekuwedzera?
MMM…. Ini ndinoda linux, asi kune angu ekare makomputa, kudzidza nezve mashandiro masystem uye kudzidza zvakawanda nezve makomputa, uye kutamba chinguva kuyedza yangu pc hehe. Kunze kweizvozvo, ini handioni chero chaicho chakanakirwa kana ichienzaniswa newindows.
A cyber ine linux yakanaka, kuparadzira ino system, asi kwete nekuti iri nani pane windows, izvo zvisiri. Kuziva maitiro ekubata ese maviri masystem hauzove nematambudziko, kana nehutachiona muWindows, kana nemitambo uye zvimwe zvirongwa muLinux.
Pindura kuna ardalus
Yakanakisa mupiro ardalus.
Zvakanaka, ndinokuudza kuti ndatova nemakore matanhatu ndiine 6 Cyber ​​Cafes achimhanya, imwe yacho iri padhuze neiyo Superior Technological uye mune kuti ini ndine maPC gumi evatengi, eayo machina 2 ane Linux Ubuntu 10, uye iyo vamwe vatatu vane Windows 7 Professional, mune ino kesi makomputa eLinux ane neinowanikwa desktop yeLinux, chokwadi ndechekuti vazhinji vevashandisi vangu vadzidzi veiyo Technological uye vanofara nebasa, nekuti panguva yese yandave Linux, havana kumbobvira vanyunyuta kuti michina inokurudzirwa, michina yakavharwa, kuti havagone kurodha chinhu chakadai, kuti havagone kuvhura izvi, nezvimwe ... Kune rimwe divi, mimwe michina ndine matambudziko mazhinji uye zvichemo, kunyangwe ini ndisingakwanise kuvabvisa nevamwe vashandisi nemaapplication.
Uyu muenzaniso kuti kana iwe uchikwanisa kupa yemhando sevhisi neLinux.
Mune imwe nzvimbo yangu, ini ndine makomputa angu ese neLinux Ubuntu 10.04 uye handina zvichemo kubva kuvashandisi, uye vese vanogara ndichigara uye vatengi vatsva seni, uye pavanenge vachida kuziva kuti zvinhu zviripi ini ndinongovabatsira kubva kuchikwata changu cheControl vachishandisa VNC, uye vanofara, nekuti ini handina hutachiona, kunyange chiri chokwadi kuti vashandisi vepakati vanongotsvaga paInternet uye mukati mayo vanofanirwa kushandisa Facebook, YouTube, kurodha mimhanzi, Messenger, email uye zvinhu zvakapusa.
Kana iri hofisi suite ini ndine OpenOffice.org uye inoshanda kwazvo kwandiri, vangangoita vese vatengi vangu vanoishandisa, ini ndakaisazve kuyambuka kuita Office 2007 kumisikidza kune avo vasingakwanise kurarama vasina iyo.
Muchidimbu, ndakave nemari yakawanda kubva pandinoshandisa Linux kupfuura nakare, nekuti vanhu vanogunun'una zvishoma uye vanoshanda zvakanyanya.
MAVERICK (COLOMBIA) akadaro
Kubva zvatakapinda mune ino nyaya, ingori fomati c, handifunge kuti ndiri nyanzvi ine makore gumi ekuziva uye haisiyo mutemo wangu tarisa kuti nei izvo kana izvo, ikozvino linux ini handikurukure neumwe munhu iyo ndiyo yakanakisa mashandiro epasi rose asi isu tinofanirwa kuziva kuti ndiwo marondedzero emaminetsi anoita mutsauko, semuenzaniso iyo interface yemutumwa yakanaka kwazvo ndizvo zvainoita windows ine vateveri vazhinji, iko nyore kwayo kubata makotesheni kunyangwe mwana ane makore mana ekuberekwa aigona kuzviita, mwanakomana wangu Juan Manuel anoisa mitambo kubva kune usb memory iyo inomupa iyeyo bvunzo ini ndakazviita ne linux uye chokwadi hachina kufanana.
Saka hazvisi nyore kune vanhu kubheja rakakura sekuchinja kwaro kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe kana kuti vari kuzondiudza kuti havana kutya kekutanga pavakaisa linux iyo nenzira iyo yakanditorera angangoita maawa mana kurodha pasi uye kuisa zvinyorwa uye mapakeji
ndatenda uye iyi email yangu pr kana iwe ukapa chimwe chinhu
Pindura MAVERICK (COLOMBIA)
/ imba zvirinani kupfuura C: akadaro
Zvakanaka, uyu musoro wakanaka, nekuti ini ndine cyber, uye chokwadi ndechekuti ndaneta neanouraya uye anozivikanwa kwazvo maGINDOS ayo anoita kunge anononoka mukuita achienzaniswa neyangu inodiwa linux ,, zvine chekuita necyber linux ndiri kuita Linux mune yangu cyber uye chokwadi ndechekuti vanhu vakaifarira zvakanyanya uye zvakare vanondiudza kuti iri nani uye nekukurumidza kupfuura GINDOS .. Ini ndinokurudzira kushandisa linux mu cyber uye nekudaro hatiiti iyo MS ipfumi, zvakare nekuda kwehutachiona uye mashandiro acho akavimbika zvakanyanya LINUX YAKO PAPA
Pindura ku / kumba zvirinani pane C:
Shamwari dzangu, ini ndichakuudza kuti ndanga ndichishandisa Linux kwemakore matatu uye chokwadi ndicho chakanyanya kunaka chiripo, vanhu vakachinjika chaizvo uye ini handina dambudziko, kunze kwekuvaudza maitiro ekuisa uye zvakapusa zvinhu. Ini ndinogona kuisa michina yandinoda 3 kana 1 kana kupfuura kana ndichida, zviri nyore kwazvo uye chaizvo kuti vanhu vanoshanda zvakanyanya zvakanyanya pazvinhu zvavo kubhurawuza nekugadzira zvinyorwa zvavo, vachitamba online, nezvimwe. Ini ndinoshandisa UBUNTU 100 uye ne cyberlinux, zvakare imwe ine BRLIX ine chitarisiko cheVista. Ini pachangu ndakagadzira system yekutungamira ndichishandisa GAMBAS, ine server server kuitira kuti vashandisi vakwanise kuona iko kushandiswa kwavo mune yega yega terminal. Ini zvakare ndine CORE11.04DUO server ine TCOS yekugadzirisa uyezve yekufambisa neyekare PIV michina isina hard disk uye kushandisa chete 2MB mugondohwe. Zvese zvinoshanda neye proxy server neUBUNTU 256 yakaiswa nemitemo yekunonoka kweYouTube mavhidhiyo uye kurodha pasi. Ndinovaudza kuti ini ndinongoshandisa Windows videoconferencing uye chimwe chinhu mubhutu mbiri uye ndiri kuzowana imwe internet ndisingatombonetseke nezvekuita chimwe chinhu kunze kwemutemo. Saka rarama kwenguva refu Linux uye ini ndinokukoka kuti usazeze uye enda kumberi kune zvakawanda zvekuwana nekudzidza uchishandisa mahara maturusi, masystem angu ese ini ndicharamba ndichiita nekusingaperi neakanakisa iyo tekinoroji yanhasi uye mune ramangwana.
Cyber ​​Kubiridzira-Lab akadaro
Mhoroi makadii, kungotaura kuti zvirokwazvo kana zvichikwanisika kukwirisa cyber neGNU / Linux, tiri Cyber ​​Kubiridzira-Lab mudunhu reQuerétaro, Mexico, uye kubvira 2008 isu tatanga kukwira cyber 100% ne GNU / Linux kunyanya uye yemahara software mune zvese. Muna 2009 takagadzira chirongwa ichi uye kubvira ipapo kusvika parizvino (2012) iri kuramba ichishanda. Ruzivo rwedu rwunokurudzira kune avo vanoshuvira kupinda munzvimbo ino yakaongororwa zvishoma, uyezve, isu tinofanirwa kusiya kuvimba nekambani ...
Mune blog yedu isu tine chinyorwa nezve chiitiko chedu:
Pindura kuCyber ​​Kubiridzira-Lab
J. Shelter Juarez akadaro
Ndanga ndichishandisa linux mune yangu cybercafé kwemakore matanhatu, ine zvayakanakira nezvayakaipira, inhema kuti vatengi vanoenda kune imwe cyber paunenge uine linux, izvo zvisina kuitika kwandiri, izvo zvandinonyunyuta nezve linux imhaka ye driver vhidhiyo, ipapo kana linux ikashaikwa yakawanda, asi inogadziriswa mune ingangoita 6%. kuve nemidziyo mitsva, ine yakanaka ndangariro kugona kwemifananidzo, ingangoita 80 GB yekuzvitsaurira ndangariro yemifananidzo. Ini ndinobva kuMonterrey NL Mexico
Pindura kuna J. Refugio Juárez